Lapis lazuli waa dhagax lazurite - macdanta 'Feldspathoid silicate' - Video
Iibso dukaanka dabiiciga ah ee loo yaqaan 'lapis lazuli dabiiciga'
Lapis lazuli macnaha. Qaybta ugu muhiimsan ee macdanta waa lazurite, macdanta 'feldspathoid silicate mineral'. Waxa kale oo ku jira calcite, sodalite, iyo pyrite. Shaybaarada qaarkood waxay ka kooban yihiin augite, diopside, enstatite, mica, hauynite, hornblende, sanka, iyo baaruud hodan ku ah lollingite geyerite. Lapis lázuli wuxuu badanaa ku dhacaa marmar crystalline sababtoo ah metamorphism xiriir. Inaan lagu khaldin lazulit.
Midabka buluugga ah ee buluuga ah waxaa ugu wacan jiritaanka jiritaanka Trisulfur xagasha xagasha ee daacuunka. Farogel elektaroonig ah oo ka mid ah elektarooniga oo ka yimid kan ugu labanlaaban ee loo yaqaan 'molecular orbital' oo loo yaqaan 'orbital'
Waan helnay Lapis lazuli nuuradda ku jirta Webiga Kokcha. Dooxada gobolka Badakhshan ee waqooyi bari Afghanistan. Halka keydka miinada ee Sar-e-Sang u furan yihiin in ka badan 6,000 sano. Afgaanistaan ​​waxay ahayd isha dhabta ah ee Masaarida qadiimiga ah. Iyo ilbaxnimadii Mesobotamiya, iyo waliba Giriiggii dambe iyo Roomaaniyiintii. Masaaridii hore waxay ka heleen alaabtan ganacsi Afghanistan uga timid Aryans. Intii lagu guda jiray dhererka ilbaxnimada Dooxada Indus qiyaastii 2000 BC. Gumeysiga Harappan (Shortugai) waxaa laga aas aasay agagaarka miinooyinka loo yaqaan 'lapis mines'.
Sida laga soo xigtay ninka ku takhasusay cilmiga macdanta ee Sorbonne Pierre Bariand. Ku hogaaminta shaqada ilaha waqtiyada casriga ah. Iyo tixraacyada Khasnadda Buluugga ah ee Afgaanistaan: Lapis lazulit (2011) waxaa qoray Lailee McNair Bakhtiar. Waxaa laga helaa "godadka", ee kuma jiraan "miinooyinka" dhaqameed. Dhagaxuna wuxuu ka yimid isha koowaad ee buuraha Kush Hindu. Gudaha Dooxada Kochka ee Afgaanistaan.
Marka laga reebo kaydka Afqaanistaan, waxaan ka helnay lapis gudaha Andes. Ku dhowaad Ovalle, Chile, iyo galbeedka Lake Baikal ee Siberia, Russia, at Tultui Lazurite deposit. Tirada yaryar waxaa sidoo kale laga helaa Angola, Argentina, Burma, Pakistan, Canada, Talyaaniga, Hindiya, iyo Mareykanka oo ku yaal California iyo Colorado.
Isticmaal iyo beddelaad
Yaan lagu jahwareerin lazulit, lapis waxay qaadataa si wanaagsan. Waxaan u isticmaali karnaa dahabka, sidoo kale xardho, sanduuqyada, mosaicska, qurxinta, taalooyin yaryar, iyo weelal. Intii lagu gudajiray Renaissance, Lapis wuxuu ahaa dhulka oo la farsameeyay si loo sameeyo midabka ultramarine. Si loogu isticmaalo frescoes iyo rinjiyeynta saliida. Isticmaalkeeda sidii midab ahaan rinjiga saliida ayaa inta badan dhammaaday horaantii qarnigii 19aad. Markii noocyo kala duwan oo kiimiko isku mid ah la helay.
Lapis lazuli macnaha
Mid ka mid ah dhagxaanta loogu doon doonista badnaa tan iyo intii ninku soo bilaabay. Midabkeeda buluugga ah ee qoto dheer, buluugga ah ayaa weli ah astaanta boqornimada iyo sharafta, ilaahyada iyo xoogga, ruuxa iyo aragtida. Waa astaan ​​caalami ah oo xigmad iyo run ah.
Waa maxay macnaha ruuxiga ah ee lapis lazuli?
Sumeriyiinta waxay rumeysnaayeen in ruuxda ilaahyadooda ay ku dhex nooshahay dhagaxa dhexdiisa, halka Masaaridii hore ay u arkeen inuu astaan ​​u yahay cirka habeenka. Ilaa waqtiyadii hore, lapis lazulit waxaa lala xiriiriyay xoog iyo geesinimo, boqortooyo iyo xigmad, caqli iyo run.
Maxay yihiin waxyaabaha lagu bogsado ee lapis lazuli?
Dhagaxu wuxuu kobciyaa nidaamka difaaca jirka, wuxuu sifeeyaa dhiigga, wuxuu yareeyaa cadaadiska dhiigga, qaboojinta iyo qaboojinta meelaha caabuqa. Waxay yareysaa hurdo la’aanta iyo vertigo, waxayna ka guuleysataa niyad-jabka.
Waa maxay chakra waa lapis lazuli?
Lapis Lazuli waa dhagaxa xigmadda wuxuuna ku habboon yahay Eye Eye Chakra Saddexaad. Cunaha Chakra waa codka jirka. Haddii la xannibo ama aan dheelitirnayn, waxay saameyn ku yeelan kartaa caafimaadka Chakras kale.
Waa imisa qiimaha lapis lazuli?
Ma aha dhagax qaali ah, laakiin runtii wax fiican ayaa weli dhif ah. Fasalada hoose waxaa lagu iibin karaa wax kayar $ 1 carat, halka maaddada superfine-ka laga yaabo inay gaarto $ 100-150 / ct. ama ka badan tafaariiqda.
Yey tahay inuu xirto lapis lazuli?
Jacaylka iyo Xiriirka. Marka ay timaado jacaylka iyo cilaaqaadka, dhagaxa qaaliga ahi asal ahaan waa gabadha ugu fiican saaxiibka. Waxay u keentaa tamarta caqliga, jacaylka, iyo bogsashada shucuurta ah qofka gashanaya ama ku dhow dhaw jidhkooda.
Waa maxay awooda lapis lazuli?
Marka la eego bogsiinta maskaxda iyo awoodaha shucuurta, dhagaxu wuxuu xambaarsanyahay tamar wanaagsan wuuna xoojin karaa maskaxda, isagoo ka caawinaya qofka xiran inuu ka adkaado arrimaha la xiriira naxdinta, niyadjabka ama murugada. Waxay ka caawin kartaa qofka xiran inuu qalqal galiyo maskaxdooda, inuu si qoto dheer uga fikiro uuna keeno rajo gudaha ah iyo geesinimo.
Lapis lazuli miyaa loo baahan yahay in la nadiifiyo?
Ku nadiifi kareemadaada adoo hoosta ku haya biyo kulul. Maaddaama ay si jilicsan u jilicsan tahay, waa in aan lagu qoyn biyo muddo dheer. Nadiifinta kadib, dhaqso dhagaxa isla markaaba sifiican.
Waxaan ku sameysanaa dahab la isku qurxiyo Lapis lazuli sida giraan, hilqado, jijin, silsilad ama surwaal.